ए डिभिजन लिग ११औं चरणमा को–को भीड्दै छन् ? (इन्फोग्राफिक्ससहित) - सबै खेल
इन्फोग्राफिक्स फुटबल समाचार
ए डिभिजन लिग ११औं चरणमा को–को भीड्दै छन् ? (इन्फोग्राफिक्ससहित)
१० पुष २०७५, मंगलवार ०९:१९ December 25, 2018 महेश कार्की	0 Comments
एन्फा विवादका कारण ४ वर्षपछि भएको सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको १०औं चरणका खेल सकिएको छ । ए डिभिजन लिगको ११औं चरणको खेलमा बुधबारबाट सुरु हुने छ ।
११औं चरणको पहिलो खेलमा ब्रिगेड ब्वाइज क्लब र हिमालयन शेर्पा क्बल भिड्ने छन् । यस्तै बुधबार नै जावलाखेल युथ क्लब र मछिन्द्र क्लब भीड्ने छन् भने एनआरटी क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबको सामना गर्ने छ ।
यसैगरी बिहीबार च्यासल युथ क्लब र एपिएफ, संकटा र मनाङ भीड्ने छन् । यस्तै १०औं चरणको अन्तिम खेलमा शुक्रबार नेपाल पुलिस क्लब र थ्री स्टार भीड्ने छन् भने सोही दिन सरस्वती युथ क्लब र त्रिभुवन आर्मीको सामाना गर्ने छ ।
लिगमा १०औं चरणका खेल सकिँदा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दै ३० अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ । उ अब उपाधिबाट एक खुड्किलामात्र टाढा छ । लागतार १० जित निकाल्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ सबै खेल जितेर च्याम्पियन बन्दै नयाँ रेकर्ड बनाउने दाउमा छ ।
लिगको आठौं चरणसम्म लिग लिडर मनाङलाई कडा टक्कर दिइरहेका दुई क्लब संकटा र थ्री स्टार क्रमश ५ र ७ अंक पछाडि परेका छन् । संकटाले १०औ चरणमा बराबरीमा रोकियो भने थ्री स्टारले लगातार दुई खेलमा २ अंक मात्र जोडेपछि उनीहरुको उपाधि यात्रामा धक्का लागेको छ ।
अन्डर डगका रुपमा आएको संकटा २५ अंक जोड्दै दोस्रो स्थामान रहँदा थ्री स्टार २३ अंकका साथ तेस्रो स्थानमा समीति छ । शीर्ष स्थानको मनाङभन्दा ७ अंकलेपछि परेको थ्री स्टार उपाधि होडबाट लगभग बाहिरिसकेको छ ।
यसैगरीका लिगको ९ औं चरणसम्म अपराजित रहेको विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब भने उपाधि होडबाट बाहिरएको छ । उसले पछिल्ला दुई खेलमा १ अंक मात्र जोडेको छ । आर्मी नवौं चरणमा थ्री स्टारसँग बराबरीमा रोकिएको थियो भने १०औं चरणमा उ विभागीय डर्वीमा एफिएफसँग अप्रत्यासित रुपमा पारजित भएको थियो ।
यस्तै विभागीय टिम एफिएफ १६ अंक जोड्दै पाचौं स्थानमा रहँदा १५ अंकका साथ पुलिस छैठौं स्थानमा सीमित छ ।
पहिलो सहभागीतामै लिग उपाधि जित्ने लक्ष्य बनाएको नवप्रवेशी च्यासल युथ क्लब १४ अंकसहित सातौं स्थानमा छ भने १४ अंक नै जोडेको हिमालयन शेर्पा क्लब आठौं स्थानमा रहेको छ ।
यसैगरी १० अंक जोडेको सरस्वती युथ क्लब नवौं स्थानमा छ भने ८–८ अंक जोडेका ललितपुरका दुई क्लब जावलाखेल र फ्रेन्ड्स क्लब क्रमशः १०आंै र ११औं स्थानमा छन् ।
यस्तै, समान ६ अंक जोडेका ब्रिगेड ब्वाइज र मच्छिन्द्र क्लब १२औं र १३औं स्थानमा रहँदा ४ अंक मात्र जोडेको लिगको पूर्व च्याम्पियन न्यूरोड टिम (एनआरटी) लिगको पुछारमा छ ।
← बिग ब्यास लिगको दोस्रो खेलमा सन्दीप : २४ बल, २४ रन ३ विकेट
राखेपका उपााध्यक्ष तिमिल्सिना र सदस्य निरौला सम्मानित →
टि–२० विश्वकप सर्न सक्ने
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार २०:०६ शंकर लामिछाने 0
मेसी र नेमार साताकै ’बेकामे’ खेलाडी
१३ भाद्र २०७५, बुधबार १८:५६ महेश कार्की 0
ओलम्पिक छनोट : साम्बाले गरिन २ गोल, नेपालद्वारा इन्डोनेसिया पराजित
२६ चैत्र २०७५, मंगलवार १९:५९ निर्वान झापाली 0
८ बैशाख २०७८, बुधबार १३:३५ सबै खेल 0
८ बैशाख २०७८, बुधबार १३:१६ सबै खेल 0
८ बैशाख २०७८, बुधबार १२:२३ सबै खेल 0
७ बैशाख २०७८, मंगलवार २१:०४ सबै खेल 0
७ बैशाख २०७८, मंगलवार २०:३८ सबै खेल 0